Literatiora :: Maniry ny hampianarana ny « riankalo » any an-tsekoly Ranoë • AoRaha
Literatiora Maniry ny hampianarana ny « riankalo » any an-tsekoly Ranoë
Endri-panoratana vaovao. Telo ny fikarohana natao tany amin’ny ambaratonga ambony mikasika ny riankalo, noforonin-dRanöe Eugène. Mbola tsy anisan’ireo endri-panoratana ampianarina any an-tsekoly anefa izy ity.
Antony voalohany nanaovan’ity mpanaoratra fanta-daza ity famelabelaran-kevitra teny amin’ny Akademia Malagasy, Tsimbazaza, ny alakamisy teo io. Nambaran-dRanöe fa kanto ary mahafehy ny fepetra tokony ho ampianarana azy any an-tsekoly ny riankalo. “Ny riankalo dia endri-tsoratra iray natao hanehoana ny kanto vita amin’ny teny. Miendrika lahatsoratra tsotra izy kanefa ahitana ireo singa rehetra mety ho hita ao amin’ny tononkalo: rima, sarin-teny, fehezanteny mifamaly rafitra, kilalaon-teny. Tsy lahatsoratra tsotra izy satria ahitana fiangaliana sy ahitana taratra ny hanatratra ny antsoina hoe: poezia vita amin’ny teny. Tsy tononkalo koa anefa satria tsy manara-drafitra”, hoy ny famaritan-dRanoë.
Ho an’ny mpifankatia, kanto raha atao riankalo ny taratasy alefa ho an’ilay olon-tiana. Azo anazavana hevitra sy andresena lahatra. Afaka handokafana sy hanoritsoritana zavatra amin’ny antsipiriany. Azo anehoana foto-pisainana sy izay mahakasika ny zava-boahary mbamin’ny tontolo iainana koa anefa ny riankalo.
Mivoy ny tontolon’ny fitiavana ny ankamaroan’ny sanganasan-dRanoë. Miisa fitopolo ny riankalo efa vitany ka nivoaka ny taona 2002 ny boky voalohany ahitana ny ampahany.
« Zedazeda », midika hoe miriorio na mitsangantsangana, ny lohateniny. Ireo mpikambana Faribolana Sandratra hatreto no mitrandraka sy maneho ny riankalo. Efa nivoaka ny boky ahitana ny angon-driankalon’izy ireo, mitondra ny lohateny hoe: « Tsimandoa ».Fredo Rakotoarisoa
CINEPAX :: Ho an’ny mpijery ny “Spiderman new generation”
Saripika :: Hahazo tombony amin’ny fitahirizana ny asany ireo mpaka sary